Vhura = Kukura | Martech Zone
Svondo, July 24, 2005 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Pakutanga gore rino, ndakashanda neNational NFL Team kuti ndiongorore dhatabhesi yavo uye eemail ekushambadzira maturusi. Icho chaive chakapamhamha ongororo yemazhinji maturusi maturusi avanogona. Idzo nzvimbo dzandakanyanya kutarisa nezvadzo dzaive:
Mano ekubatanidza ekunze mhinduro
Kugona kuita michina
Kuteerera kwekambani kuburikidza neaccount manejimendi uye rutsigiro
Iwo maviri ekutanga eaya aive mabhenefiti mune ramangwana. Ini ndaida kuve nechokwadi chekuti sangano raishanda nemhinduro dzaigamuchira kusangana uye kushandisa michina, kunyangwe hazvo izvo zvazvino maitiro angave asina kunge kusvika kumakwikwi. Iyo nharo yakaoma kuti vanhu vanzwisise, asi makambani ane hunyanzvi hwepamoyo. Kana vatanga kushanda kunze kweavo epamberi kugona kuti vawedzere imwe mari, ivo vanotanga kushomeka yavo yepamoyo chigadzirwa uye vangangove nesarudzo yezvigadzirwa izvo zvine hupfumi, asi zvakashata mukugadzirwa, rutsigiro, uye hunyanzvi.
Mazuva ano tekinoroji nzvimbo iri kuchinja. Ini ndoda kunongedzera makambani kuvhura matekinoroji ayo anogona kuita otomatiki uye akabatanidzwa mushe, pane maficha-akapfuma zvigadzirwa.
Pakupedzisira, kambani yakatora kuraira kwangu. Panzvimbo pekushanda mune imwe mhinduro, vatanga kushanda mumhinduro nhatu dzakasiyana, uye imwe isiri kuwanikwa parizvino, iri kukona. Tikiti yavo inoitwa muhurongwa hwavo hwekutengesa tikiti, yavo Vatengi Relationship Management inoitwa mune yavo CRM system (Salesforce), uye yavo Email Kushambadzira Solution kunoitwa mune yavo Email Kushambadzira Solution (Exacttarget). Mhinduro yechina ndeye online online yekugadzirisa mhinduro, chimwe chinhu chatisina kuona kusvika nhasi.
Mukati mesvondo rekubatanidzwa kwekutanga, takave neemail kunze kwemukova yekuvandudza kutaurirana nevabati veTimu yeTikiti yavo. Iye zvino tave kushanda mukubatanidza yavo dhatabhesi dhatabhesi kune yavo CRM ... dambudziko nderekuti iyo tikiti sisitimu haina kusangana yekushamwaridzana. Izvo zvinosuruvarisa uye zvinoonekwa senzira yekuvharira mukuenderera nekuvandudza mukuita.
Iyo tikiti kambani inogona kuda kufungisisa zano ravo uye kunamatira kune kwavo kwepamoyo kugona, zvikasadaro mumwe munhu achauya nemhinduro ichatamba zvakanaka uye kutsiva ivo.
Tags: APIkunyorera programming interfacekukurasoftware yakabatanidzwakusanganavhura software